लुम्बिनी प्रदेशको २०७८/७९को बजेट समिक्षा | हजुरकाे पाेष्ट लुम्बिनी प्रदेशको २०७८/७९को बजेट समिक्षा | हजुरकाे पाेष्ट
लुम्बिनी प्रदेशको २०७८/७९को बजेट समिक्षा
बजेट भन्नाले बर्षकै आयब्ययको एउटा आनुमानित विवरण हो । यो जन चासोको बिसय पनि हो । यसमा बर्ष भरिमा गर्ने विभिन्न खर्चको विवरण बारेमा विभिन्न शीर्षक बारे छुट्याएको छ । कति बिकास निर्माण गर्ने ? कतिमात्रमा खर्चगर्ने भन्नेबारे विभिन्न शीर्षक छुट्याइएको हुन्छ । यो संघीयसरकारले जेष्ठ १५मै ल्याएको थियो र प्रदेश सरकारले उक्तबजेट आषाढ १मा ल्याउने चलन छ । त्यो अनुसार सबै सात प्रदेशहरुले बजेट त्याएका छ्न त्यो अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशको बजेटबारे लेखमा उल्लेख गरेको छ ।
आगामी ७८/७९को यस प्रदेश अन्तर्गत बजेट यहि आषाढ १ मा प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । बजेट ४० अर्ब ९५करोडको रहेको छ ,चालू तर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार र पुजिगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार साथै बित्तीय स्थानिय तह बित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
गतबर्ष भन्दा यो ४अर्ब ४९करोड बढि हो,गतबर्ष ३६अर्ब ३५ करोड २५ लाख थियो ।
खर्च ब्यहोर्ने श्रोतहरु
राजस्वबाट वाँडफाँड १३ अर्ब २० लाख रोयल्टी बाट १ अर्ब २ करोड ९७ लाख ससर्त अनुदान बाट २३ करोड ३लाख!समपुरक अनुदान बाट ६३ करोड ४९ लाख!चालू आर्थिक बर्षको बचत खाताबाट सातअर्ब ५ करोड रहने आनुमान छ।
बजेटको राम्रो पक्ष
चालुखर्च पुंजिगतको तुलनामा कम देखियो राम्रो हाे । जवसम्म पुजीगत खर्छ बढ्दैन तवसम्म बिकास निर्माण गर्न गारो हुन्छ । बजेट ले
कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पाइएको छ। किसान कल सेन्टरलाई थप प्रभाबकारी बनाउने , बिस्तार गर्ने । “म किसान प्रदेशको सान” अन्तरगत उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत । प्रत्येक वडामा एक एक जना हरित स्वयंसेवक, नमुना फर्म स्थापनाकाे लागि ९ करोड बिनियोजन । प्रत्येक पालिकामा अधिकृत स्थरको कृषि प्राबिधिक ।९सय ८३ वडामा प्राबिधिकको लागि ३४ करोड बिनियोजन । प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने, प्रत्येक पालिकामा स्माट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता !कृषिकर्मी कार्यक्रमको लागि ६ करोड बिनियोजन । साथसाथै प्रत्येक जिल्लालाइ एउटा उत्पादन विशेष क्षेत्र बनाउने । पहाड हिमालमा बांझाे जग्गाको लागि विशेष कार्यक्रम र स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष योजना रहेको पाइन्छ । कोभिड हस्पिटलको लागि प्रत्येक हस्पिटलले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्यक्रम । यसमा खटिने स्वास्थ कर्मिलाइ प्रोत्साहन भत्ता सुरक्षा कर्मिलाइ भत्ता लगायत रहेका छ्न । स्वास्थ क्षेत्रलाई प्रभाबकारी बनाइने, दाङमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने । सोह्रबर्ष मुनिका क्यान्सर पीडितलाई एकलाख । जेष्ठनागरिक र बालअस्पताल निर्माण गर्ने । सबै हस्पिटलको सेवामा बिस्तार गर्ने , जस्ता योजना राम्रा छन ।
यो बजेट राम्रो रहेता पनि कसरी यसलाई प्रभाब कारी बनाउने ? यस प्रदेशमा बेरोजगार युवाको संख्या बढि छ, त्यसैले उक्त क्षेत्रमा कृषिलाई प्रारथमिकता दिनु राम्रो हो। कृषिबाट बस्तुउत्पादन छिटो हुने र प्रतिफल छिटै आउने हुँदापनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ ,लागानी गरेरमात्र हुदैन उक्त बस्तु उत्पादन भएपछि बजारमा त्यसको बिक्रिको ग्यारेन्टी पनि आबस्यक छ । किसान युवाले बस्तु उत्पादन गर्ने ,तर कृषि उपज भारत बाट अायात गर्ने गर्नु हुदैन स्वदेशी बस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ । अनुदान दिंदा कृषकलाइ पहुचको आधारमा नभई नियम कानुन सङ्गत तरिकाले दिनुपर्छ।
माटो अनुसार बस्तुहरुको उत्पादन गर्ने गर्नुपर्छ । कुनक्षेत्रमा कुनबस्तु उत्पादन हुन्छ? त्यो बस्तु उत्पादन गर्ने गर्नुपर्छ । कृषिको लागि किसानलाई उचित बीउ ,मल आधुनिक औजार प्राविधिक को व्यवस्था हुनुपर्छ। किसानलाई कृषिगर्ने पर्याप्त जमिनकाे ब्यबस्थापनि गर्नुपर्छ । सानो टुक्रेजग्गामा खेती गरेर पुग्दैन र कस्तोमा खेतिगर्ने कस्तोमा घरवनाउने भन्नेबारे आजै निर्णय गर्नुपर्छ । जथाभाबी प्लटिङ रोक्नुपर्छ !अनुदान लिएका कृषि फर्ममा नियमित अनुगमन गर्ने , डेरि छुर्पी उद्योग लाई अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सिंचाइको बारेमा बजेट बोलेन किन? बिना सिंचाइ कसरि खेती गर्ने?
गत बर्ष देखि कोरोनाले बिकास निर्माणमा ठुलो असर गर्यो यस बारे समीक्षा गर्ने र अागामि बर्ष जुनसुकै अबस्था आएपनी बिकास निर्माण सम्बन्धि काम रोक्नु हुँदैन। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भएपनि संचालन गर्नुपर्छ ,आयोजना छनौट गर्दा बिज्ञको सल्लाह अनुसार छनौट गर्नुपर्ने र सुरुभएका आयोजना हरुलाइ बेलाबेलामा अनुगमन गर्नेगर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री स्वराेजगार कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउनु पर्छ । युवालाइ स्वरोजगार बनाउन तालिम अझै प्रभावकारि ढंगले संचालन गर्नु पर्छ ।स्वास्थ्य तर्फ बाल ,जेष्ठनागरिक र ट्रमा सेन्टर को स्थापना गर्ने भनिएको छ, बिसेसज्ञ सहितको भनिएको छ, त्यो तल्काल कार्यानयन हुनुपर्छ।
बजेटमा बेरोजगारी कसरी घटाउने र गरिबी कसरी कम गर्ने भन्ने देखिएन , यस संवन्धमा एकिन तथ्यांक हुनुपर्छ । प्रत्येक वडाहरुमा बेरोजगार युवा कति छन? तिनिहरुलाई कसरी रोजगार बनाउने भन्नेबारे एउटा बिस्तृत योजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । बेरोजगार युवाहरूलाई विशेष तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयन को लागि खवारदारी र नियमित अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ ।
पटौटी अर्घाखाँची !